Forum serasera malagasy Miraikitra eo amin’ny kibony izy mirahavavy - Dinika forum.serasera.org
Miraikitra eo amin’ny kibony izy mirahavavy
Fitohizan'ny hafatra : Miraikitra eo amin’ny kibony izy mirahavavy
Noue - 18/05/2009 07:00
Miraikitra eo amin’ny kibony ireo kambana mirahavavy, zanaka fahasivin-dRtoa Josie Aurette. Indroa ambinifolo nitondra vohoka izy ary fito ireo zaza velominy any amin’ny tanànan’i Sahavavy, Kaominina Ifito, Distrikan’i Toamasina II. Ny alahady 10 mey 2009 teo no teraka ireo kambana mirahavavy ireo. Efa nanamarika ny mpitsabo fa kambana ireo zaza ao an-kibony. Nony teraka anefa dia hita fa miraikitra eo amin’ny kibony izy mirahavavy. Toy ireny mifanatrika ireny izy roa vavy ary toa i Soavina Mahagaga (amin’ny ilany havanana eo amin’ny sary) no mitondra ny rahavaviny. I kambana Mahagaga (ankavia amin’ny sary) no nivoaka voalohany, araka ny nambaran’ny mpampiteraka. Nanaraka ho azy anefa ny rahavaviny rehefa tsy afaka nanena intsony ilay reniny. Hary soa aman-tsara avokoa ny loha sy ny tanan’izy mirahavavy ireo. Iraisan’izy roa kosa ireo taovam-pivoahana raha ny fijery azy ety ivelany. Mampiavaka azy ireto manokana ny fananany tongotra telo. Ny iray amin’ireo dia ahitana rantsana sivy be izao. Salama tsara aloha ireo zaza ireo na dia voatery nanampy ronono hafa aza ny reniny sy ireo fianakaviana nanaraka azy ao amin’ny Hopitalibe Toamasina.
ni81 - 18/05/2009 07:24
Sahala amin'ny nanjo an'i Imahagaga sy Imahalatsa koa izany io mahazo azy mirahavavy io?
xxx - 18/05/2009 09:35
Maninona raha mba anontaniana renseignement momba ny nikarakaràna an'Imahalatsa sy Imahagaga natao opération tany Frantsa mbola tsy ampy iray taona izay. Anontaniana akaiky izay association niatoka azy . Ny hevitra tsy azo tsy amin'olona hoy ny fitenin-drazantsika.
mmmhh - 18/05/2009 10:25
ndryyy, mampalahelo ry reto a,
ary ohatrany mijaly be ireo tongotra kelin'izay roa vavy miforitra kely,
Ni81 Sahala amin'ny nanjo an'i Imahagaga sy Imahalatsa koa izany io mahazo azy mirahavavy io?
i Mahagaga sy Mahalatsa anie nitambatra fotsiny fa tsy nisy taova niraisany e,
fa izy roavavy miraikitra no misy taova iraisana, ho sarotra ny fandidiana,
Mivavaha ho azy e
accolade - 18/05/2009 11:19
Efa nisy nanao operation amin'ny cas sahala @ izao tany ivelany tany kah.
Nefa dia salama tsara tsy marofy ireo zaza nosarahina hatramin'izao !!
ni81 - 18/05/2009 14:26
Citation Maninona raha mba anontaniana renseignement momba ny nikarakaràna an'Imahalatsa sy Imahagaga natao opération tany Frantsa mbola tsy ampy iray taona izay. Anontaniana akaiky izay association niatoka azy . Ny hevitra tsy azo tsy amin'olona hoy ny fitenin-drazantsika.
Mambra teto @ serasera no nanampy ny fikarakarana azy ireo.
Citation i Mahagaga sy Mahalatsa anie nitambatra fotsiny fa tsy nisy taova niraisany e,
ny tiako nolazaina teo dia hoe ilay izy siamois e
tess - 18/05/2009 22:25
aza atao mahagaga intsony ny prenom raha vao kambana izany sao miraikitra.
tess - 18/05/2009 22:27
ni81 - 18/05/2009 22:43
Citation aza atao mahagaga intsony ny prenom raha vao kambana izany sao miraikitra.
TWING - 22/05/2009 08:54
ka ilay anarana anie teraka vô natao e
raha mandinika nareo dia ohatran ny misy fitsapana ataona Andriamanitra ny malagasy mihintsy.Miseho izany amin ireto kambana misesy ireto.
Ny cyclone moa dia tsy lazaina